Nin Gows laga Haayey oo Dhaqtar ku durey Cirbad Sun ah ka Dibna Hilibkiisii jarjaray | Somalisan.com
Home Afsomali Nin Gows laga Haayey oo Dhaqtar ku durey Cirbad Sun ah ka...
Nin Gows laga Haayey oo Dhaqtar ku durey Cirbad Sun ah ka Dibna Hilibkiisii jarjaray
Dhakhtar 58 jir oo ka mid ah Dhakhaatiirta Dowladda Hindiya ayaa xabsiga la dhigay, kadib, markii lagu helay inuu dilay dareewalkiisa, kadibna intuu jarjaray hilibkiisa ku shubay Aashito, si aan loo aqoonsanin.
Boliska dalkaasi ayaa la sheegay inay Dhakhtaarkaasi qabteen Habeenkii Isniinta ee la soo dhaafay, kadib, markii ay dadka deriska arkeen isagoo dhiig ka tirtirayo dhismihii uu ka deganaa magaalladda Bohobaal oo caasimad u ah Gobalka Madhya Pradesh ee dalkaasi.
Magaca Dhakhtarka dilkaasi geystay waxay Boliska ku sheegeen Dr. Sunil Mantarri, iyadoo Marxuumka uu dilayna la oran jirey Veerendra Pachori.
Boliska waxay sheegeen in la tuhunsan yahay inuu Dhakhtarka falkaasi u geystay, kadib, markii uu Dareewalkiisa kaga shakiyey inuu xiriir hoose la lahaa Xaaskiisa.
Dhakhtarka waxaa la sheegay inuu Dareewalkiisa mindi kaga dhuftay dhuunta, wuxuuna markii uu geeriyooday bilaabay inuu jarjaro, kadibna uu hilibkiisa shiido, kuna baabi’iyey Aashito.
Muddo 3 saacadood ayaa la sheegay inay ku qaadatay inuu hilibka Dareewalkiisa ku jarjaro Suuliga dhexdiisa.
Ilaa 100 Litir oo Aashito ah ayuu u adeegsaday falkaasi, sida ay sheegeen Boliska oo iyaga baaritaan kadib soo helay haraagga qeybo ka mid ah jirka Dareewalka la dilay, oo uu madaxiisa ka mid ahaa.
Dhacdada ugu yaabka badan ayaa la sheegay inay ahayd inuu Dhakhtarka cirbad ku dhuftay Dareewalka oo ka cabanayey Xanuun dhinaca Gooska, balse, daqiiqado kadib wuu miyir-beelay, taasi o osoo dedejisay inuu Dhakhtarka dilo, kadibna jarjaro hiilibka Dareewalkiisa.
Si kastaba ha ahaatee, Dhakhtar Sunil Mantarri waxa uu u muuqday inuu qaabka dilkaasi ka tixraacay qaabkii ay kooxdii Sirdoonka Sacuudiga ay bishii October 2-dii ee sannadkii hore u dileen Saxafigii Jamaal Axmed Khashoggi, kaasi oo aan ilaa iyo haatan la helin maydkiisa oo la sheegay inay Sirdoonka jarjareen, kadibna aashito ku baabi’iyey haraaggii maydkiisa.
Previous articleMagaalada Oodweyne Oo La Ciir-ciiraysa Saxmada Qurbajoog iyo Ganacsato Degsiimadeeda Ku Soo Hayaamay Iyo Waxyaabaha Sababay Waqtigan
Next articleDhibaatooyinka Lagala Kulmo Lacagaha telaphonada la iskuugu diro oo soo badanaya
Sheikh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo Xabsiga loo Taxaabay
Somalisan News - December 30, 2018
explosion in Mogadishu and government officials killed